Guri Wacan |Hal qayb oo ka mid ah Shanghai Sunshine Technologies Co., Ltd.
Dareemka Heerkulka Infrared Thermopile ee Codsiga Guriga Smart
Qaboojiyaha caqliga leh ee isticmaalaya dareeraha thermopile infrared wuu ka duwan yahay qaboojiyaha dhaqameed.Dareemka waxaa loo isticmaali karaa in lagu ogaado haddii ay jirto il kulaylka aagga induction, si loo xakameeyo jihada hawada hawada iyo mugga hawada iyadoo loo eegayo xaaladda dhabta ah.
Codsiga dareemayaasha thermopile infrared ee qaboojiyaha, waxay gaari karaan cabbirka heerkulka saxda ah, waxay leeyihiin sifooyinka jawaab-celinta degdega ah, waxay ku siin karaan jawiga kaydinta ugu fiican ee cuntada ee qaboojiyaha.
Cunto karinta Induction
Makiinada induction ee leh dareemaha thermopile infrared waxay cabbiri kartaa heerkulka si sax ah, taas oo xallin karta dhibaatada in foornada dhaqameedku aysan si toos ah u hagaajin karin heerkulka kulaylka iyadoo loo eegayo heerkulka loo dejiyay, mana gaari karo heerkulka saxda ah ee xakamaynta, taas oo keenta qashinka tamarta iyo dabka. si fudud ay u keento gubashada qalalan.
Foornada mikrowave ee caqliga leh ee leh dareeraha kulaylaha infrared ayaa ka duwan foornada mikrowave-dhaqameedka.Waxay hagaajin kartaa awoodda microwave-ka iyadoo cabbiraysa heerkulka cuntada waqtiga dhabta ah, si loo gaaro waxtarka sare iyo badbaadinta tamarta, iyo hubinta in cuntadu ay aad u macaan tahay.
Kiishiyaha korantada ee caqliga leh ee leh dareeraha heerkulbeegga infrared ayaa ka duwan kiilada korantada ee dhaqameed.Waxay cabbiri kartaa heerkulka saxda ah ee kiliyaha wakhtiga dhabta ah, waxay ka hortagtaa gubashada qalalan, waxayna tamarta ku badbaadin kartaa kuleyl caqli leh.
Hawo-mareenka jikada ee caqliga leh ee leh dareeraha heerkulbeegga infrared wuxuu ka duwan yahay hawo-qaadayaasha jikada ee dhaqameed.Marka la cabbiro heerkulka kulayliyaha wakhtiga dhabta ah, marawaxada waa la xakameeyaa si loo hagaajiyo heerka nuugista qiiqa saliidda oo loo badbaadiyo tamarta si hufan.